Hiran State - News: Saraakiishii Shabaab ka tirsaneyd ee ka soo jeeday Puntland oo Shabaab iska baxay kedib .
Saraakiishii Shabaab ka tirsaneyd ee ka soo jeeday Puntland oo Shabaab iska baxay kedib .
Puntland: (HS)- Waxaa maanta shir jaraa’id ku qabtay Hotelka magaalada Garoowe Suldaan Cumar Maxamed oo sheegay in uu ahaa xubin ka tirsan xarakada Ururka Al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta dalka Somaliya islamarkaasna uu haatan isaga baxay sida uu saxaafada u soo bandhigay walow uu sheegay in uu xog dheeraada ka hayo kooxda xarakada Al-shabaan, uuna si gaar ah ugu warami doono maamulka Puntaland.
Cumar Mohamed ayaa sheegay inuu xog dheeraada uu ka hayo Ururka Al-shabaab kuwaas oo ay ka mid yihiin qaabka ay u shaqeeyaan iyo cida la shaqaysa ee gacanta ka siisa howlaha ay fulinayaan isaga oo intaas ku daray in ay tababaro siiyaan ciidamada Al-shabaab saraakiil ajaaniiba oo ku sugan koofurta dalka Somaliya isagoo caro kala dul dhacay maamulka Somaliland.
Suldaan Cumar ayaa intaas ku daray in ay jiraan wada shaqayn toosa oo ka dhaxaysa xarakada Al-shabaab iyo maamulka Somaliland isaga oo sheegay in ay Somaliland ku bixiso dhaqaale tiro badan kuwaas oo fududeeya howl galada Al-shabaab. Arintaani uu maanta ka hadlay Suldaanka ayaa sheegay in ay alshabab yihiin cadow xun oo dalka iyo dadkaba kusoo duulay ,taasi oo uu daliil uga dhigay sida ay dadka dhiigooda u daadinayaan.
Mar ay saxaafadu wax ka waydisay shaqada uu u qaabilsanaa Al-shabaab ayuu sheegay in uu isagu yahay nin aqoon leh islamarkaasna haysta sharci dibadaa hase ahaatee uu u qaabilsanaa in uu dibada uga keeno kooxda Al-shabaab hubka noocyadiisa fud fudud isaga oo ka soo dajin jiray Soomaliland iyo Puntland, sidoo kale waxaa uu Maamulka Puntland ka codsaday in ay insha ku hayaan dhaq dhaqaaqa Al-shabaab ay ka wadaan deegaanada Puntland.
Cumar Mohamed ayaa intasi ku daray in uu la kulmay masuuliyiinta sare sare ee Puntland islamarkaasna uu uga warbixiyey sababata keentay in uu isaga baxo kooxda Al-shabaab, isagoo intaas ku daray in uu u dul qaadan waayey dhibaatada iyo gumaadka Al-shabaabku ku hayaan umada Somaliyeed.
Dabcan Suldaan Cumar mar hore ayuu ogaa in ay Shabaab xun yahiin degaano badan oo ka mid ah koofurta Soamliyana lagu dhibaateyey shacab badan lakinse hada dhiiga ayaa gacay kedib markii howlahii uu ka fulin jiray degaano kale oo Somaliyeed ay u soo gudbeen dhulka Puntland sida Gowraca oo hada ku bilaawday degaanada Puntland.
Inta badan ciidamda ka soo jeeda Puntland iyo Somaliland ee ku jira Shabaab ayaa ugu badnaa kuwa dadka koofurta Somaliya dhibaatooyin u geysan jiray iyagoo ujeedadoodu aheyd sidii ay degaanadooda oo nabad ah ganacsiga gobolada dhexe oo dhan ugu wareegi lahaa laakinse hada xaalka iyaga ayuu ku xun yahay oo hada waa la gowracayaa dadkooda.
Runtii inta uu Somaliland ka sheegayo Puntland waa kala mid waayo labadooduba waxey aaminsan yahiin iney wax ku yahiin rabshadaha koofurta Somaliya ka jirta.
· admin on June 29 2011 02:56:58 · 0 Comments · 2026 Reads ·
14,600,038 unique visits